ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကားကို.. ဟောလိဝုဒ်က.. မင်းသားသုံးပြီး.. ဟောလိဝုဒါရိုက်တာနဲ့.(ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင်).ရိုက်တယ်..။
နဲနဲ ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ကိုဘလောချက်
ဆရာဝင်းဖေ အင်တာဗျူးလေး ပြန်ဖေါ်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
အတိုင်းမသိ ကျေနပ် ပီတိဖြစ်သွားပါကြောင်း…
ကွန်းမန့်လေးအတွက်ရော ထပ်ဖြည့်ပေးသွားတာအတွက်ရော ကျေးဇူးပါ ဗျာ။
ဖတ်ခဲ့ဘူးတာလေး မှတ်ထားပြီး ပွားလိုက်တာပါ။
အရမ်းကြီး စွတ် လေးစားမနေပါနဲ့။